शिक्षक बन्ने मेरो रहर !
भदौ १, २०७६ | ध्रुवलक्ष्मी अधिकारी भण्डारी
मेरा श्रीमान् २५औं वर्षदेखि अध्यापनमै हुनुहुन्छ। बुबा सेवानिवृत्ता शिक्षक हुनुहुन्छ। दाजुभाउजू, दिदीबहिनी, जेठाजू, जेठानीदिदी, भतिजाहरू— सबै शिक्षण पेशामा नै छौं। र, मैले पनि शिक्षण बाहेक कुनै पेशाको कल्पना गरिनँ ।
दिदीले ‘छिटो हिंड्, ढिला भयो’ भन्दै हातमा समातेर स्कूल लैजानुहुन्थ्यो । दिदीको झेला किताब र फलफूलले भरिएको हुन्थ्यो । स्कूल टाढा थियो । बिहान १० बजे स्याँस्याँ गर्दै पसिनासरी हामी प्रार्थना लाइनमा पुगेर राष्ट्रिय गान गाउँथ्यौं । त्यसपछि ठेलाठेल गर्दै कक्षाकोठामा पुगिन्थ्यो । बाटोको थकान, चर्को घाम र गाह्रो झोला; पसिनासरी भए पनि कक्षा सफा गर्ने होड चल्थ्यो । कक्षाको भुइँमा डुङ्डुङ्ती धूलो । हरेक शुक्रवार चाहिं गोबर ल्याएर लिपपोत गरिन्थ्यो । कक्षाकोठा सफा देख्दा कस्तो आनन्द ! बस्नको लागि अँध्यारो अँध्यारो लाग्ने कोेठामा काठका छोटा–छोटा फलेक हुन्थे । अगाडि एक–दुई वटा राम्रा बेन्च पनि । राम्रा बेन्चमा बस्नको लागि होड चल्थ्यो । आफ्नो ठाउँ सुरक्षित गर्न छिटो स्कूल आएर किताबहरू राखिन्थ्यो ।
प्रार्थनाको केहीबेरपछि शिक्षक सानो छडी, हाजिरी खाता अनि चक बोकेर आउनुहुन्थ्यो । हामी भने कुन सर आउनुहुन्छ भन्दै हेथ्र्यौं । सरहरू ‘मन पर्ने’ र ‘मन नपर्ने’ दुवैखाले हुनुहुन्थ्यो । हामी त जिस्किने, गफ गर्ने, हामीलाई माया गर्ने, नपिट्ने सरकै पर्खाइमा हुन्थ्यौं । अहिले पनि मलाई केही शिक्षकको याद आइरहन्छ ।
त्यसवेला अहिले जस्ता रङ्गीन चित्र भएका पुस्तक कहाँ देख्न पाउनु ? कपुरी क, खरायो ख भन्दै रटियो, कण्ठ गरेर पाठ बुझाइयो, नत्र पिटाइ खाइन्थ्यो । डरै डरमा पढिएछ । कक्षा–२ मा पढ्दाको एउटा घटना याद आउँछ । शिक्षक सानो छडी र चक बोकेर कक्षामा प्रवेश गर्नुभयो । हामीले तितेपातीले बोर्ड मेटेर तयार पारेका थियौं । उहाँ हामीतिर फर्कनुभयो । हामी बेन्चमा नअटेर ठेलमठेल गर्दै थियौं । होहल्ला बीच पोल लगाउनेको संख्या निकै थियो । ‘चुप लाग्, अहिले तँलाई, तेरो नि तेरो’ भन्दै गाली गर्नुभयो । कक्षा शान्त भएपछि ‘किताब निकाल, आज हामी घरपालुवा जनावर कुकुरको पाठ पढ्छौं’ भन्नुभयो । कुकुर शब्द सुन्ने बित्तिकै म हाम्रो गाउँको काले कुकुर र टिके कुकुर सम्झन थालिसकेकी थिएँ— बाँदर रुङ्ने ठाउँमा कुकुरलाई बाँधेर राखेको, अनि एकैछिन छोडेपछि कुदेर बाँसघारीमा गएर त्यो कुकुरले दिसा खाएको । प्रायः सबै साथीहरूले गाउँका त्यस्तै कुकुर देखेका थिए ।
सर पढाउन लाग्नुभयो— ‘कुकुर घरपालुवा जनावर हो । यो घरको पहरेदार र रक्षक पनि हो । हामीले तिहारमा कुकुरको पूजा गर्नुपर्छ । यसले भात खान्छ । खोले खान्छ । मासु खान्छ’ आदि आदि । पढाइ सकेर सरले सामूहिक प्रश्न गर्नुभयो— ‘लौ भन त कुकुरले के खान्छ ?’ हामीले उच्च स्वरमा ‘गुहु खान्छ सर’ भन्यौं । सरले त ‘यतिबेरसम्म पढाएको के सुनिस् ?’ भन्दै हामीलाई गाली गर्न र पिट्न पो लाग्नुभयो । हामी डरायौं, किन पिट्नुभएको होला भन्ने बुझन सकेनौं । हामीले आँखाले देखेको वास्तविक र प्रत्यक्ष सिकाइ त त्यही थियो । त्यसपछि भने हामी प्रश्न गर्दा पनि उत्तर दिन अगाडि सर्न छोड्यौं । जवाफ मिल्दैन, गाली र पिटाइ खानुपर्छ भनेर । वास्तवमा सिकाइमा प्रत्यक्षीकरणको भूमिका कति हुँदोरहेछ भन्ने बारेमा हामी अनभिज्ञ नै थियौं ।
हामी महिला शिक्षकहरूलाई मिस भन्थ्यौं । त्यसवेला कुनै–कुनै स्कूलमा मात्र मिसहरूलाई देख्न पाइन्थ्यो । हाम्रो स्कूलमा एउटी मिस हुनुहुन्थ्यो । हामी उहाँलाई ‘राम्री मिस’ भन्थ्यौं । हामी ती मिसको राम्रो, गोरो; लिपिस्टिक लगाएको अनुहार हेर्ने, मिससँग नजिक हुने इच्छा राख्थ्यौं । विवाह नभएकी मिस निकै राम्री, तर कठोर स्वभावकी हुनुहुन्थ्यो । त्यसवेला म कक्षा–२ मा पढ्थें ।
‘कुकुर घरपालुवा जनावर हो। यसले भात खान्छ। मासु खान्छ’ भन्दै अन्त्यमा सरले प्रश्न गर्नुभयो, ‘लौ भन त कुकुरले के खान्छ ?’ हामीले गाउँको काले कुकुर सम्झँदै भन्यौं, ‘गुहु खान्छ सर’। तर सरले त हामीलाई गाली पो गर्नुुभो !
मेरो पनि पहिले दिदी जस्तै भाइलाई च्यापेर स्कूलमा बानी गराउन लैजानुपर्ने जिम्मेवारी थियो । मैले पढाइको भन्दा पनि भाइ रुन्छ कि, घर जाने भन्छ कि, कसैले उसलाई पिट्लान् कि भन्ने चिन्ता बढी गर्नुपर्थ्यो । बेन्चको छेउतिर भाइलाई च्यापेकी हुन्थें । किताबहरू च्यातिएका थिए । साँघुरो ठाउँ भएकोले कापीमा लेख्दा साथीहरूले हल्लाइदिन्थे । भाइ पनि डट्पेन खोसेर कापीमा कोरिदिन्थ्यो । भाइ रिसाहा र छुच्चो पनि थियो, ढुङ्गा टिपेर हान्न लाग्थ्यो । मलाई जोगाउन मुश्किल पथ्र्याे । भाइलाई लिएर घरमा आइपुग्दा म आफूलाई स्वतन्त्र भएकी ठान्दथें अनि आनन्दले खेल्थें । भाइ स्कूल नगएदेखि म पनि साथीहरूसँग खेल्न पाउथें जस्तो लाग्थ्यो । तर भाइलाई स्कूल लैजानै पर्थ्यो ।
एक दिन एकजना साथीले ‘तेरो भाइलाई हाम्रो बेन्चबाट हटा, नत्र तँलाई पनि हामी बस्न दिंदैनौं’ भनेर पयठ लगाएर ठेल्न लागिन् । भाइलाई दह्रोसँग च्यापेर म बस्दै थिएँ । तर उनी वलिष्ठ थिइन्, मैले ठेल्न सकिनँ । भाइ भुइँमा लड्यो र रुन लाग्यो । मैले ती साथीलाई एक पटक डडाल्नोमा पिट्न भ्याएँ । उनी कुद्दै बाहिरतिर गइन् । ‘राम्री मिस’ लाई बोलाएर यसले पिटी भन्दै ल्याइन् । मिस पनि उनीसँगै बाँसको सिर्कनु लिएर आउनुभयो । म भाइको मायाले छातीमा गाँठो पारेर रुन नसकिकन भाइलाई फकाउँदै थिएँ । मिसले मलाई— ‘किन यसलाई कुटेको ? चल्छेस्, लु चल’ भन्दै सुम्ला उठ्ने गरी हिर्काउनुभयो र अफिस कोठातिर जानुभयो । मिसले सिर्कनु लिएर भित्र पस्दा भाइ डरले रुन छोडेको थियो । तर मलाई कुटेर मिस गएपछि भने मेरा आँखाबाट आँसु तरर्र झरिरहे । मुखबाट रोदन भने निकाल्न सकिनँ । भाइ भने नरो दिदी भन्दै आँसु पुछिदिन लाग्यो । अरू सबै साथीहरू चुप लागेर मलाई हेर्न थाले । त्यो वेला मलाई लाज, पीडा र भाइप्रतिको जिम्मेवारीले एकसाथ थिचेको थियो । तर म फुच्चीका समस्या ती राम्री मिसलाई के थाहा ? धेरैबेर रोएपछि मेरो अवोध मनमा एउटा दृढ कल्पना आउन थाल्यो– आफू ठूली भएपछि मिस बन्ने र केटाकेटीलाई माया गरेर पढाउने । बालमैत्री शिक्षाको खाँचो त पहिले नै थियो, तर हामीले त्यस्तो परिवेशमा पढ्न पाएनछौं ।
आई.ए. को पहिलो वर्ष पढ्दै गर्दा विवाह बन्धनमा बाधिएँ । श्रीमान्को उत्प्रेरणा, हौसला र सहयोगको परिणामस्वरुप विवाहपछिको व्यावहारिक चटारोलाई व्यवस्थापन गर्दै अध्ययनलाई निरन्तरता दिन सफल भएँ । परिणामस्वरुप शिक्षाशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह (एमएड) उत्तीर्ण गर्न सफल भएँ । लामो समयसम्म पनि सेवा आयोग नखुलेकाले शिक्षक बन्ने सपना अधुरो थियो । २०६९ सालमा खुलेको शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापनमा सहभागी भई निमावि तहको सामाजिक अध्ययन विषयको शिक्षक पदमा सफलता प्राप्त गरें । २०७१ भदौ १३ गते मेरो सपना साकार भयो । म स्थानीय फिदिम माध्यमिक विद्यालयमा निम्नमाध्यमिक तहको सामाजिक विषयको शिक्षकका रूपमा नियुक्त भएँ ।
शिक्षक बन्दा आफूमा भएका ज्ञान बाँड्न पाइने, विद्यार्थीसँग घुलमिल हुन पाइने, समय बितेको पत्तो नहुने, कति रमाइलो र आनन्द ! आदर्श शिक्षक बन्न सबै प्रकारका तालहरूसँग नाच्न सक्नुपर्ने, रम्नुपर्ने, आफूले जानेको ज्ञानलाई सहज रूपमा सिकाउन सक्दा सजिलो हुने ।
सामाजिक शिक्षणको अनुभव
म सामाजिक विषयको शिक्षक हुँ । यो विषयको क्षेत्र धेरै फराकिलो हुन्छ । गीत, कथा, कविता, नाटक, संवाद, समाचार लेखन, वादविवाद, वक्तृत्वकला, अनुशासन, नैतिकता, गाउँ, घर, समाज, समुदाय, राष्ट्र, भाषा संस्कृतिको संरक्षण, संस्कार, जनसंख्या, शहर र गाउँबीचको तुलना, देश–विदेश, विश्वबन्धुत्वको भावना यो विषयको क्षेत्रले समेट्दछ । यो विषयले बालबालिकालाई आदर्श नागरिक बनाउने अभीष्ट राख्दछ ।
मलाई साना–साना नानीबाबुसँग रम्न र उनीहरूसँग नजिक हुन असाध्यै मनपर्छ । साना नानीहरूलाई माया गरेर फुक्र्याइ फुक्र्याइ पढाउँदा रमाइलो हुन्छ । म कक्षा–६ मा बच्चाहरूलाई नेपालको नक्शा बनाउन सिकाउँछु र बनाउन लगाउँछु । कसैले निकै राम्रो, कसैले ठीकैको, कसैले नराम्रो नक्शा बनाएर मलाई देखाउँछन् । नक्शा हेरेर म राम्रोलाई आहा ! कति राम्रो भन्दै विद्यार्थीपट्टि देखाइ दिन्छु । अनि नराम्रो बनाउने भने हतार–हतार मेट्दै राम्रो बनाउने कोशिश गर्दै हुन्छन् ।
सामाजिक अध्ययनका थोरै विषयवस्तु मात्र पाठ्यपुस्तकमा हुने र धेरै कुरा शिक्षकले नै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छन् । कक्षाकोठामा विषयवस्तु पढाउँदा व्यावहारिक जीवनसँग सम्बन्धित बनाउँदै पढाउने गरियो भने कक्षा पनि रमाइलो र उपलब्धि पनि बढी हुन्छ । जस्तो कक्षा–६ मा ‘ट्राफिक नियम’ भन्ने विषयवस्तु पढाउँदा पुस्तकमा संक्षिप्त विषयवस्तु भए पनि थप सामग्रीहरू जुटाउनु राम्रो हुन्छ । कहिल्यै ठूला शहर नदेखेका गाउँघरका नानीबाबुहरूलाई म आफ्नो मोबाइलमा खिचेका र डाउनलोड गरेका काठमाडौंका आकाशे पुल, जेब्राक्रस, ट्राफिक जाम, मानिसको भीड, ट्राफिक प्रहरी, ट्राफिक लाइट सम्बन्धी फोटो र भिडियो उनीहरूसँगै बसेर देखाउने गर्छु । यसरी हामी शिक्षकका लागि मोबाइल पनि ठूलो शैक्षिक सामग्री बन्न सक्छ । बच्चाहरू ठेलमठेल गर्दै उत्साहित र खुशी भएर हेर्दै रमाउँछन् । केहीबेर देखाएपछि म मोबाइल अफ गरेर उनीहरूका कुरा सुन्दै बोर्डमा चित्र बनाइदिन्छु ।
सामाजिक अध्ययनका थोरै विषयवस्तु मात्र पाठ्यपुस्तकमा हुने र धेरै कुरा शिक्षकले नै खोजी गर्नुपर्ने हुन्छन्। पढाउँदा व्यावहारिक जीवनसँग गाँसेर पढाउने गरियो भने कक्षा रमाइलो र उपलब्धि पनि बढी हुन्छ।
“कस्तो मज्जा हुँदै थियो । तिमीहरूले मिसलाई धेरै ठेल्यौ, अनि बन्द गर्नुभयो । मिस बोल्न छोड्नुभयो, रिसाउनुभयो, मैले त राम्ररी हेर्न पाइनँ । मिस फेरि हामीलाई देखाउनु न ।” उनीहरूका यस्ता कुरा सुन्दा मलाई रमाइलो लाग्छ । कति उत्साहित मेरा नानीहरू ! म चुप लागेपछि सबैका आँखा बोर्डका चित्रमा हुन्छन् । कोही पढ्दै हुन्छन् ।
सडकमा रातो बत्ती बल्दा के गर्ने, नीलो बत्ती बल्दा के गर्ने भन्ने बारे एक दिन मैले एउटा बनावटी कथा सुनाएँ । जसरी छिटो सिक्छन्, त्यसरी नै सिकाउनुपर्छ । कथा भनेपछि सबैको नजर मतिर हुन्छ । कथा के होला भन्ने खुल्दुली हुन्छ । म शुरू गर्छु— ‘गाउँमा बस्ने रामुलाई शहरमा पढ्ने दाइकहाँ जान मन लागेछ । उसले दाइ भेट्न जाँदा तरकारी, घिउको बट्टा, अचार, गुन्द्रुक झेलामा हालेछ । हातमा भने एउटा पाकेको फर्सी र सानो दहीको ठेकी झुण्ड्याएछ । रामुलाई गाडीमा चढाएर उसका बुवा घर फर्किनुभएछ । रामु ज्यादै खुशी हुँदै, गाडीको झयालबाट रमिता हेर्दै साँझपख काठमाडौं पुगेछ । बसबाट ओर्लिएपछि रामु त शहरका झ्लिीमिली बत्ती हेरेको हेर्‍यै भएछ । उसको नजिकै ट्राफिक प्रहरी सिट्ठी फुक्दै थिए । रामु उभिएको छेउमा ट्राफिक लाइट बल्दै रहेछ । रामु मनमनै भन्दैछ— ‘आहा ! कति राम्रा बत्ती, कहिले पहेंलो, कहिले रातो, कहिले नीलो बल्ने ।’ त्यही नजिकै जेब्राक्रस त रहेछ, तर रामुलाई भने त्यो के होला पत्तै भएनछ र जथाभावी तरीकाले बाटो काट्न लागेछ । गाडीले उसलाई ठक्कर दिएछ । रामु पछारिएछ । उसको काँधमा बोकेको फर्सी लड्दै गएछ । त्यो फर्सीमा ठोक्किएर दुई वटा मोटरसाइकल लडेछन् । रामुको ठेकी पनि फुटेछ । धन्न रामुलाई ठूलो चोटपटक चाहिं लागेनछ ।’
कथा सकिएपछि नानीबाबुहरू रमाइलो मानी गलल्ल हाँस्छन् र खुशी मान्छन् । म एकछिन उनीहरूलाई हाँस्न नै छोडिदिन्छु, म पनि उनीहरूसँगै हाँस्छु । गाउँका बच्चालाई ट्राफिक नियम सिकाउन बनावटी कथा पनि ठिकै हुँदोरहेछ । विचरा साना नानीबाबुहरू, पत्याउने उमेर ।
बच्चाबच्चीले रमाइलो र खुशी चाहन्छन्, उनीहरूलाई माया ममताकै खाँचो पर्छ । होमवर्क चेक गर्न म बसेकी हुन्छु । उनीहरू वरिपरि आउने, कसैले साडीको आँचल लगेर टाउकामा राखिदिने, अर्कोले भएन राम्रो, मिसलाई नचला भन्ने, कसैले कपाल चलाउने आदि आदि । वेला–वेला होमवर्क देखाउँदा यी ममी भन्छन्, अनि लजाउँछन्, ला मिसलाई ममी पो भनेछु । म उनीहरूलाई हेर्दै भन्छु— ‘मिस ममी पनि त हो नि; हैन त !’
त्यसैगरी कक्षा–७ मा उमेर अलि बढी सकेकाले कथा लगायत प्रसंग मिल्ने विविध कुराहरूतर्फ मोडेर उनीहरूलाई सिकाउन सजिलो पर्छ । उमेर बढ्दै जाँदा बालबालिकाका स्वभाव र व्यवहार पनि परिवर्तन हुँदै जान्छन् । उनीहरूको बालमनोविज्ञानलाई बुझेर शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नु साँच्चै नै राम्रो र सरल हुँदोरहेछ । कक्षा–८ देखि १२ लाई पाठ्यांशभित्रका पाठका अलावा बाहिरको वातावरणमा पनि भिज्न सक्ने, परिवेश सुहाउँदो व्यवहार सिकाउनु बढी सान्दर्भिक हुनेरहेछ । खाली कण्ठ गराई र सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई व्यावहारिक पाटोका हरेक क्षेत्रमा बालबालिका भिज्ने र रम्ने किसिमको सिकाइको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ ।
मैले जीवनमा शिक्षण बाहेकका कुनै पेशाको परिकल्पना गरिनँ । मेरो श्रीमान् २५औं वर्षदेखि अध्यापन कार्यमा संलग्न हुनुहुन्छ । मेरो बुबा सेवानिवृत्त शिक्षक हुनुहुन्छ । दाजुभाउजु, दिदीबहिनी, जेठाजू, जेठानीदिदी, भतिजा सबै शिक्षण पेशामा नै आबद्ध छन् । मलाई शिक्षा अध्ययन गरी योग्यता हासिल गर्ने र शिक्षक बनाउने कार्यमा मेरो बुबा र मेरो श्रीमान्को अहोरात्र योगदान र सहयोगप्रति म कृतकृत्य छु ।
मलाई शिक्षक हुन पाएकोमा ठूलो गर्व छ । आफूले पढाएका विद्यार्थीसँग बाहिर कतै भेट हुँदा खुशी लाग्छ । सिक्न त अझै धेरै बाँकी रहेको छ, तर पनि शिक्षक बन्ने मेरो रहर भने पूरा भएको छ !
फिदिम मावि, पाँचथर